Marinka taariikhda ee loo maro Qasriga Windsor | Safarka Absolut
Maritaanka taariikhda ee loo maro Qasriga Windsor
Tirada weyn ee taalladaha iyo dhismayaasha xiisaha dalxiis ee magaalada London, waxay noqon karaan kuwo aad u ballaaran oo ballaaran oo lagu garan karo safar gaaban oo fasax ah; Sababtaas awgeed, way fiicnaan laheyd inaan diirada saarno midkood haddii aan dooneyno inaan si qoto dheer ku ogaano, midkoodna uu yahay Dhismaha caanka ah ee Windsor.
Waa inaan sheegnaa in qalcaddan Windsor ay ku taal dhinac dhinac ka mid ah Wabiga Thames, ficil ahaan qiyaastii 32 km dhanka Bari ee magaalada London; qalcaddu waxay qaadataa magaca magaalada ay ku taal, joogitaanka tiro badan oo dhacdooyin taariikheed ah oo kaligood dhacay ayaa la ogaan karaa.
Marka ugu horeysa waa inaan sheegnaa in Dhismahan Windsor la dhisay sanadkii 1080 oo uu dhisay William, oo go'aansaday in dhismahani uu qayb ka ahaa giraanta dhufaysyada ku wareegsan magaalada London oo dhan, wax loo qaadan karo taariikh sheeko kudhexeysa dalxiiska magaalada. Goor dambe, Eduardo II wuxuu wax ka beddelay qaabkii Norman ee qalcaddii ku lahayd qasriga Gothic, sidoo kale wuxuu aasaasay "Kuliyadda St. George" ee Ward Hoose. Taariikhda qalcadani waxay la sii waday Eduardo IV, oo isna markii dambe dhisay St. George's Chapel, isagoo awood u leh inuu ogaado joogitaanka irid yar oo ku taal Ward Hoose oo lagu daray Henry VIII.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maritaanka taariikhda ee loo maro Qasriga Windsor
Dowladda Cuba waxay maal gashataa badeecadaha iyo adeegyada